Ukubaluleka kokuqina kweemvakalelo kwesi sibini | IBezzia
Ukubaluleka kokuqina ngokweemvakalelo kwesi sibini
UMaria Jose Roldan | 04/05/2021 22:00 | Ubudlelwane
Ayisiyonto ingaqhelekanga ukubona inani elikhulu lolwalamano olusekwe kunxibelelwano lweemvakalelo.. Ingxaki enkulu kukuba abantu abaninzi bakubona oku kuqhotyoshelweyo njengento eqhelekileyo phakathi kwesi sibini.
Nangona kunjalo, ukunamathela akufani nothando kunye nenkululeko kunye nokuzimela kulo naluphi na ulwalamano kubalulekile xa kusenziwa ukonwaba ngaphakathi kwesi sibini. Kwinqaku elilandelayo sikunika uthotho lwezikhokelo ukufezekisa ukomelela ngokweemvakalelo phakathi kweqabane lakho.
1 Iindlela zokwazi ukuba unengxaki yokuncipha ngokweemvakalelo
2 Zeziphi iimpawu ezenzeka kuqhotyoshelo lweemvakalelo
3 Ukubaluleka kokuqina ngokweemvakalelo kwesi sibini
Iindlela zokwazi ukuba unengxaki yokuncipha ngokweemvakalelo
Enye yezinto ezicacileyo ezinokubonisa ukuba unengxaki yokuncamathiselwa, Yinyani yokungayonwabeli inkululeko yakho kunye nokuzimela njengomntu. Ukugcina iqabane lakho engqondweni ngalo lonke ixesha akulunganga kwaphela kwaye kunokubangela ukuba ubudlelwane bube yityhefu.
Ukonwaba akunakuxhomekeka kwiqabane ngalo lonke ixesha. Umntu kufuneka onwabe yena kwaye hayi omnye umntu. Ukuba oku akwenzeki, kuyinto eqhelekileyo ukuba ubudlelwane ekuthethwa ngabo busekwe kulwalamano olunamandla lomnye umntu.
Zeziphi iimpawu ezenzeka kuqhotyoshelo lweemvakalelo
Kukho iimpawu ezicacileyo ezihlala zibonisa ukuba umntu akanalo naluphi na uhlobo lokuzimela kwaye ubonise ukunamathela okunamandla ngokweemvakalelo:
Umntu akanako ukonwabela nangaliphi na ixesha, ukuba iqabane lakho alikho.
Esi sibini sigcinwe esibingelelweni kwaye ubona kuphela ubuhle kunye nezinto ezintle malunga nayo.
Ubukho bomona kunye noloyiko lokuphulukana naphakade.
Akukho ukuzithemba nokuzithemba.
Kukho uxinzelelo kunye novalo ngokwazi ngalo lonke ixesha ukuba isibini senza ntoni.
Njengokuba besesitshilo apha ngasentla, ukunamathela ngokweemvakalelo akulunganga kwesi sibini kuba sinempilo kwaba bantu babini. Ngokufanelekileyo, iqela kufuneka libekhona ngalo lonke ixesha:
Yinto enye ukuhlala njengesibini kunye nokwabelana ngobomi kunye nomnye umntu kwaye kungenye into yokunciphisa umda kubobabini ngokupheleleyo. Kubalulekile ukuba ube nobakho ubomi ukuze ukwazi ukwenza izinto ngokukodwa njengokuhamba nabahlobo okanye ukuya ezivenkileni.
Ulonwabo alufanele lilinganiselwe kwisibini kuphela. Ngaphandle kokuba nobudlelwane nomnye umntu, kuya kufuneka uyazi ukuba wedwa kwaye uyonwabele into yokuba lilolo kumaxesha ngamaxesha.
Awunakuxhomekeka komnye umntu ukuze wonwabe. Umntu omdala kufuneka azifunele ulonwabo, iiAkukho mntu unokunceda.
Isibini asinakusekelwa kukungathembani kuba oku akunampilo kubudlelwane obunjalo. Ukuthembana yintsika esisiseko apho ulwalamano oluthile kufuneka lwakhiwe khona. Ukuba oku kuyenzeka akukho sizathu sokuba ikhwele eloyikekayo livele. Ngaphandle kwalonto kwaye kufuneka kubekho iqela, kukwabalulekile ukuba kubekho uthethathethwano phakathi kwabantu bobabini.
Ngamafutshane, Naluphi na ulwalamano olunokuthi luthathwe njengolusempilweni kufuneka lusekwe kulwalamano lwabantu ngokweemvakalelo. Eli qela libalulekile kulwalamano olomeleleyo kwaye omabini amalungu onwabile ngokwenyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Ukubaluleka kokuqina ngokweemvakalelo kwesi sibini
Yintoni omele uyenze kwaye uyenze kwisixeko saseCórdoba eAndalusia